Xarunta Xuquuqal Insaanka Somaliland oo Cambaareysay Xadhigga Afar Weriye oo Lagu Xidhay Boorama | Gabiley News Online
Xarunta Xuquuqal Insaanka ee Somaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa, ayaa War-saxaafadeed ay Arbacada maanta soo saartay ku sheegtay inay inay ka xun tahay xadhigga afar Weriye oo tan iyo Sabtidii ku xidhan Saldhigga Booliska ee magaalada Boorama, ka dib markii ay qoraallo kala duwan ka baahiyeen Maayerka Boorama.
Xarunta Xuquuqal Iinsaanku waxay cambaareynsay xadhiggaas, iyadoo Xukuumadda Somaliland ugu baaqday inay si shuruud la’aan ah xorriyaddooda ugu soo celiso Afarta Weriye ee Boorama ku xidhan.
Waxaanay Xarunta Xuquuqal iinsaanku afarta weriye xadhiggooda ku tilmaantay mid aan sharciga loo marin.
War-Saxaafaeedka Xarunta Xuquuqda Aadamaha Somaliland Hargeysa ka soo saartay oo Nuqul ka mid ahi soo gaadhay Warbaahinta Hargeisapress, ayaa u dhignaa sidan:-
“Xarunta Xuquuqal Insaanka ee Somaliland waxa ay ugu baaqaysaa xukuumadda Somaliland inay si dhaqso ah oo aan shardi ku xidhnayn u sii dayso suxufiyiinta afarta ah ee ay ku xidhay Boorama.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxa ay ugu baaqaysaa xukuumadda inay xorriyaddooda u soo celiso afarta suxufi oo ay ilaaliso xorriyadda warbaahinta.” Sidaa ayay warkeeda qoraalka ah ku tidhi Xarunta Xuquuqda Aadamaha Somaliland.